Bandhig loo samaynayay Buug Saxaafadeed Cusub oo ka dhacday Karachi, Pakistan ( DAAWO SAWIRADA ) | Somalisan.com Home
Bandhig loo samaynayay Buug Saxaafadeed Cusub oo ka dhacday Karachi, Pakistan ( DAAWO SAWIRADA ) 11/21/2012 4:30:00 Bandhigga Buug Saxaafadeed Cusub
Xaflad lagu daah furayay buug ay kuqoran yihiin casharo iyo tababarro saxaafadeed , laguna qoray Afka Soomaaliga ayaa lagu qabtay magaalada Karachi ee Koonfurta Pakistan.
Buuggan oo lagu magacabo “ Wehelka Weriyaha” , waxaa qoray C/qaadir C/laahi Cismaan (Farayaamo), waana buug, tabobar saxaafadeed si faah faahsan uga hadlaya qodobo saxaafaxaded oo wax tar u leh saxafiyiinta Somaaliyed.
Kulankan lagu daah furayay buuggan cusub oo ay kasoo qayb galeen, qaar kamid ah waxgaradka iyo ardayda kunool magaalada Karachi ee Pakistan ayaa lagu soo bandhigayay faa’iidada buuggan u leeyahay saxafiyiinta Soomaaliyeed ee mihnaddooda saxaafadeed jecel.
Qoraaga buuggan C/qaadir Farayaamo oo sharaxayay sababta ku dhalisay qoridda buuggan ayaa marka hore u mahadceliyay shirkaddii buuggan daabacday ee SCANSOM PUBLISHERS oo uu sheegay inaysan wax shuruud ah ku xirin daabacaadda buugga markii ay garawsatay codsigii ahaa caawinta saxafiyiinta Soomaaliyeed.
Qoraagu wuxuu dhinaca kale sheegay in markii uu arkay baahida loo qabo in saxafiyiinta la siiyo tabobar wax ku’ool ah oo kusaabsan dhinacyada, qoraalka aasaasiga, qoraalka warka , anshaxa saxaafadda, doorka saxafiga , sixidda khaladaadka farsamo ee soo laa laabta uu bilaabay aruurinta buuggan , wuxuu kaloo xusay in khibradda dheer ee uu saxaafadda u lahaa iyo fursad jaamacadeed oo uu helay inay ka caawisay in arimaha ay saxafiyiintu aadka ugu baahan yihiin inuu ogaado , soona bandhigo.
C/qaadir ayaa xusay in waqtiga uu buuggani kusoo aaday ay tahay mid baahi wayn loo qabo, asagoo ka dhawaajiyay in saxafiyiintu ay aad ugu baahan yihiin buugag noocan oo kale ah, tabobaro ka duwan asagoo soo jeediyay in qaabka loo qabto tabobarada saxafiyiinta la tayeeyo, isla markaana la qiimeeyo in saxafiyiintu casharada sidii la rabay u qaateen, ee kaliya lagu ekaan in casharadii la baxshay .
Dhinaca kale kasoo qayb galayaashii kulanka Daahfurka Buugga ayaa fursad muhiim ah ku tilmaamay in buuggan saxaafadda ka hadlaya uu wax wayn ka badali karo tayada saxafiyiinta Soomaaliyeed ..
Waxay sidoo kale saxafiyiinta Soomaaliyeed ku dhiiri galiyeen inay tallaabadan oo kale qaadaan, kana faa’iidaystaan qodobbada kuqoran buugga oo u muuqda kuwo la jaanqaadaya marxaladda maanta iyo baahida saxafiyiinta.
Qaar kamid ah kasoo qayb galayasha ayaa dawladda Soomaliya usoo jeediyay inay muhiim tahay in la laba laabo xirfadda saxafiyiinta , si booska ay uga baxdo , khaladaadka farsamo iyo midka sharci ama anshax ee ay saxafiyiintu la yimaadaan.
Qoraaga buugga mar lawaydiiyay qaabka buuggan lagu gaarsiin karo dalka Soomaaliya ayuu sheegay in waqti dhow la gaarsiin doono magaalooyinka waawayn ee Soomaaliya marka xigana la fududayn doono in qof walba oo saxafi ah uu helo.